जिन्दगीभरी संरक्षणमा लाग्नेलाई मनकारीको खाँचो :: NepalPlus
जिन्दगीभरी संरक्षणमा लाग्नेलाई मनकारीको खाँचो
दिनेश गिरी ((नागरिकताको नाम दिनानाथ गिरी) ) उती साह्रो चिनिएका पात्र होइनन । किनभने जिन्दगीमा उनले जति मानिस भेटे, देखे । त्यो भन्दा बढि चरा, गैंडा, पूतली, निलगाइ, गैडा र अन्य जिव देखे होलान् । उनको आवत जावत भनेकै तिनै जिव बस्ने थलो हो । नचिनिएकै त होइनन् । उनी चिनिएका छन् । तर संरक्षण जगतमा । जीवनमा नेपालको तराई क्षेत्रका अधिकांश जंगल र बासस्थान छिचोले । पुरिँदै गरेको तालको महत्व स्थानिय मानिसलाई बताए । जैविक विविधता नासिनुको मार आफैंले भोग्नु पार्छ । अहिलेका पिँढेले वातावरण प्रदुषित बनाए, खोलानाला फोहोर गरे, वन मासिदिए भोलीका आफ्नै छोराछोरीमाथी अपराध हुन्छ भनेर ज्ञान बाँडे । यस्ता ज्ञान बाँड्न पर्यटक घुमाएर आएको थोरैपनि त्यतै खर्चिए । यतिखेर समाजमा उल्लेखनिय काम गरेका यिनै पात्र भक्तपुरको अस्पत्तालको मानव इन्द्रिय प्रत्यारोपण शाखा (human organ transplant center) दुबै म्रिगौला असफल भएर म्रित्युसित लडिरहेका छन् । कसैले अलिकति सहयोग गरिदिए म्रिगौला फेरेर कार्यक्षेत्रमा खटौंला भन्ने झिनो आशा पालेर मनकारीको आशामा बसेका छन् । कुनै मनकारी, अलिकति सहयोगी मन भएको कोहि वा दुई तिन जना पात्र यत्रो विशाल धरतीबाट कस्सो ननिस्केला त ? यहि आशामा अस्पत्तालको ओछ्यानबाट आँखा डुलाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय उनी बुद्दको जन्मस्थल लुम्बिनी र त्यस वरिपरिको बिग्रँदो वातावरणका बारेमा चिन्तित थिए । जैविक विविधता र वातावरणिय ज्ञान फैलाउन लुम्बिनी क्षेत्रलाई कार्यथलो बनाएका थिए । काम गर्दा गर्दै दुबै म्रिगौला खराब देखिएपछि उनी अकस्मात कसैको सहयोगमा त्यहाँ पुगेका हुन् । उनलाई म्रिगौला प्रत्यारोपण गरेर फेरि वातावरण जोगाउने सन्देश बाँड्ने रहर छ । तर त्यो इच्क्षा कसले पूरा गरिदिने ?
उनलाई यस कारणपनि बाँच्नु छ । घरमा कमाउने उनी एक्लो छोरो हुन् । भाई बहिनि आफ्ना गोडामा उभिन सक्ने छैनन् । स्कूलमा पढ्दै गरेका तिनको लालनपालन र शिक्षाको चाँजो मिलाउने भारपनि उनैको छ । बाउ आमा नभएकाले अभिभावकत्व लिनु उनैको बाध्यता छ । ‘म तलमाथि भए सपरिवार सडकमा पुग्ने भो’ यो बेदना र संभावित आशंकालेपनि उनलाई ओछ्यानमै हुटहुटी गराउँछ । नेपालप्लसकालागि उनको यथार्थ बुझ्न खोज्दा उनको तस्विर लिन खोजियो, अस्पत्तालमै रहेको । उनी भावुक बने ‘म त्यसरी रनवन हट्टकट्टा भएर नदि खोला, पहाड र थुम्का छिचोलेको, जनावर जसरि दगुरेको मान्छे यो अस्पत्तालमा बिजोग भाको फोटो राख्न सक्दिन’ उनले बिह्वल भएर राजेन्द्र अधिकारीसित भने ।
म्रिगौला प्रत्यारोपणका लागि म्रिगौला दान गर्नेको खोजी गर्दै थिए । बिकल्प नभेटिएपछि उनैका एक भाई पर्नेले आफ्नो एक म्रिगौला दान दिन राजी भएका छन् । त्यो म्रिगौला प्रत्यारोपण गर्न आठ देखि दश लाख लाग्छ । तर त्यसलाई प्रत्यारोपण गर्न खर्चको अभावले उनी अस्पत्तालमा पल्टिरहेका छन् । चितवनमा छन् भाइ बहिनि । भेट्नपनि हत्त पत्त पाउँदैनन । यता उनी छटपटिने । उता घरमा भाइबहिनीले उनको रोग सन्चो भाको खबर पर्खेर बस्ने । आफन्तहरू पिरलिने । यहि दुख, अत्यास, बेदना र छटपटिका बीचमा अस्पत्तालको ओछ्यानबाट उनले मनकारीहरुसित आग्रह गरेका छन्, केही सहयोगकालागी ‘लौ न सक्नुहुन्छ भने बचाउनुस्, बाँच्दापनि गरेकै हुँ, बाँच्न पाए फेरि गर्छु ।’
सहयोग गर्न मन लाग्नेका लागि उनको बैंक खाताको ठेगाना
Dina Nath Giri
Bharatpur branch, account number 008000776890018.